Kulanka Golaha Shacabka oo goordhaw ku furmay 148 Xildhibaan Kooram ah – Kalfadhi
Waxaa hadda Kooram dhan 148 xildhibaan ku furmay Kukanka 9-aad ee Xildhibaannada Golaha Shacabka. Kulankan, oo ay ahayd inuu furmo 10:00 AM ayaa waxa uu dib u dhacay muddo ku dhaw laba saac. Sababtu waxay ahayd in saacaddii la rabay inuu furmo kulanka uusan buuxin Kooramka. . Laakiin sida ay xildhibaanno ka tirsan golaha u sheegeen Kalfadhi, waxa uu Xeer Hoosaadka Goluhu ogol yahay in hal saac uun dib u dhici karo kulanka golaha.
Guddoomiyah Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan, oo kulanka maanta shir-guddoominaya, ayaa sheegay in ajandaha kulanka, oo horay loogu qeybiyey Xildhibaannada, uu yahay ka doodista Hindise Sharciyeedka Shirkadaha Ganacsiga oo Sabtidii, markii laga doodi lahaa, uu kulankii maalinkaas u baaqday Kooram la’aan.
Guddoomiyaha Guddiga Dhaqaalaha, Ganacsiga, Warshadaha iyo Maalgashiga ee Golaha Shacabka, Xildhibaan Maxamuud Beene-beene, ayaa xildhibaannada u soojeediyey warbixinta Hindisaha Sharciga Shirkadaha Ganacsiga, kaas oo ay mar sii horeysay u soo gudbisay golaha Wasaaradda Ganacsiga Soomaaliya. Wasiirka Wasaaraddaas, Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir (Maareeye) ayaa jooga jooga kulanka.